Hiran State - News: Wararkii ugu danbeyey: R/wasaare C/wali oo booqasho rasmi ah ku imaanaya dalka Kenya halka Shariifka diiday iyo waliba xaalka Shabaab.
Wararkii ugu danbeyey: R/wasaare C/wali oo booqasho rasmi ah ku imaanaya dalka Kenya halka Shariifka diiday iyo waliba xaalka Shabaab.
Kadib casuumaad ay gaarsiisay dowlada Kenya Shiikh Shariif iyo Raysul wasaaraha Somaliya Cabdi Wali Gaas ayaa waxaa casuumaadaas ku gacan seyray Shariifka oo aad u diidan inba Shabaab dalka laga sifeeyo sabab iyo sabab la,aanba.
Dowlada Mareykanka oo isbedelada hada socda si taxadir leh ula socota ayaa maalintii shaleyto aheyd madaxda dowlada Kenya kuwar geliyeen iney Shariifka wacaan weydiiyaane waxa uu ku diidan yahay ciidmada Kenya ee doonaya iney bur buriyan amaba wiiqaan awooda Shabaab ee koofurta Somaliya ayaa mar ay dowlada Kenya xiriir la yeelatay sheegay inuu aad uga soo horjeedo in Somaliya ka dhalato nidaamka dowlad goboleedyada uuna aad uga soo horjeedo in degaanada jubooyinka ka hirgalo maamul goboledka Azania ee uu garwadeenka ka yaha Prof Gaandi.
Laakinse hadalkaasi waxuu wado cusub u furayaa beesha caalamka iyo shariifka maadama sida warkiisa ku cad uu doonayo inuu Mogdisho ka joogo dhawr xaafadood Amisomna ku waardiyeeyaan halkaas Shabaabne ay qaraxyo ka geysato gobolada dalka iyo wadamada deriska ah kuna faraxsan yahay arintaas.
Hadaba wararkii ugu danbeyey waxey sheegayan inuu jeex jeexay Shariifka casuumaadii ay soo gaarsiisay dowlada Kenya xili uu reysul wasaaraha Somaliya isku diyarinayo isaga iyo wafti balaaran oo uu hogaaminayo iney u baqoolaan dalka Kenya maalmaha inagu soo aadan oo loo maleynayo maalinta sabtida amaba axada soo socota.
Shariifka ayaa hadalo hanjabad ah u jeediyey C/wali gaas kaasi oo ah inuusan safarka Kenya aadin hadii uu aadane uu shaqada ka ceyrin doono, lakisne waxey u badan tahay in hadalkaasi dheg loo dhigin safarkiisana si wato reysul wasaaraha.
Reysul wasaraha Somaliya ayaa laga yaabaa inuu ka faa ideysto qaladaadkii uu horey u galay saaxiibkiis Farmaajo uuna beesha caalamka inta uu ku sugan yahay Kenya ka dhadhiciyo sidii wadanka looga saari lahaa xiliga kumeel gaarka si ay meesha uga baxdo qilaafkaan markasta labada Shariifka iyo Shabaab sabab u yahiin ee dowladkasta la kulanto dhawrkii biloodba isla markaana horey u salfata xukumad kasta oo dalka ku dhisan.
Dhinaca kale Shabaab ayaad moodaa inuu mugdi soo kala dhaxgalay oo kuwa Mogdisho iyo nawaaxigeeda jooga doonayaan in Shababka jubooyinka la bur buriyo iyagoo u dhaaranaya dowlada Kenya arintaan oo lagu sheegay in ay siyaasad Hasan Daahir Aweys,AbuMansur iyo Shiikh Shariif.
Waxaana laga yaba hadii lagu fahmo arintaan in horjoogayasha Shabaabka jubooyinka si dhib yar iskuku dhibaan maamulka Azania maadama ay si wanaagsan isku garanayan laabda ciidan sidaasina u baaqdo dhiig badan iyo barakac ka dhici lahaa halkaas.
Guud ahaan siyaasada Shariifka ayaa ah mid fashil ah waxeyna inta abdan wasiirada xukumadu ka foganayaan in Shabaab lagu shaambadeeyo sida uu Shariifka isku dhiibayna madonayaan iney isku dhiibaan madaama ay intooda badan heystan basabooro reer galbeed ah heystaan.
Isha warka Hiiraan Satate
· admin on October 27 2011 17:16:29 · 0 Comments · 1774 Reads ·
14,568,469 unique visits